Xubno ka kala socda Puntland iyo Galmudug oo Gaalkacyo wada hadal ku yeelanaya – STAR FM SOMALIA
Xubno ka kala socda Puntland iyo Galmudug oo Gaalkacyo wada hadal ku yeelanaya
Iyadoo Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug weli ay ka taagan tahay xiisada u dhaxeysa ciidamada Maamulada Galmudug Iyo Puntland, ayaa Wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in wada hadal Magaalada Gaalkacyo ay ku yeelanayaan Xubno ka kala socda Maamulada Galmudug Iyo Puntland.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, ayaa sheegay inay isla garteen Maamulka Puntland dhankooda inay soo diraan Wasiiro ka tirsan Maamulkooda, halka Galmudugna ay direyso Wasiiro ka tirsan Maamulkooda, kadibna labada dhinac waxa ay ku shirayaan Magaalada Gaalkacyo.
Ujeedka guud ee shirka ayaa ah sidii loo dhameyn lahaa xiisada ka taagan Magaalada Gaalkacyo ee sababtay dagaaladii ka dhacay Magaaladaasi oo kumanaan ruux oo reer Gaalkacyo ah ay ku salkaceen.
“Arinta ku saabsan dagaalada iyo rabshadaha ka taagan Magaalada Gaalkacyo, waxaan ku heshiinay Ergo Wasiiro ah oo dhankooda ka socda uu soo diro anagana dhankeeda Ergo Wasiiro ah aan dirno, labadii Ergo waxa ay joogaan Magaalada Gaalkacyo, xiriirkii ugu horeeyay ayeey sameeyeen, waxaan rajeynayaan berina howsha inay ka soo fiicnaato oo xabad joojin la sameeyo.” Ayuu yiri Guuleed oo ka hadlaayay Magaalada Gaalkacyo.
Inkastoo Xaalada Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ay tahay mid degan ayaa dhinaca kale waxaa Magaalada isku horfadhiya ciidamadii ka kala tirsanaa Maamulada Galmudug iyo Puntland ee ku dagaalamay Magaalada Gudaheeda.
Dagaalka Magaalada Gaalkacyo ayaa asalkiisa ka biloowday dhismo Maxjar ah oo Puntland ay ka dhiseyso dhul lagu muransan yahay oo u dhaxeeya Maamulada Galmudug Iyo Puntland.
Magaalada Gaalkacyo ayaa u kala qaybsan Koonfur iyo Waqooyi, waxaase jira dhul banaan oo labada Maamul in muddo ah ku muransanaayeen, kaasi oo Puntland ay ku xadgudubtay islamarkaana ay ka dhisatay Dhismo Maxjar ah, kaasi oo sababay colaada Gaalkacyo.
Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa sheegay inuu taageersan yahay doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Hirshabeelle